STE-akateedzana Muchina Unyanzvi Tsananguro -Wuxi Daya Technology Co, Ltd.
ST-dzakateerana Muchina Unyanzvi Tsananguro
STA-dzakateerana Machine technical Tsananguro
STC-yakateedzana Muchina Unyanzvi Tsananguro
STE-akateedzana Muchina Unyanzvi Tsananguro
C Chimiro Mechanical Press
C Dhizaina Imwe Crank Mechanical Press (ST akateedzana)
C Dhizaina Imwe Crank Mechanical Press (STX akateedzana)
C Dhizaina Kaviri Crank Mechina Press (STC akateedzana)
Solid Chimiro Mechanical Press
Solid Dhizaina Imwe Crank Mechanical Press (STD akateedzana)
Solid Furemu Yakapetwa Crank Mechanical Press (STE akateedzana)
Yakatwasuka Side Mechanical Press (STF akateedzana)
Semi Yakavharwa Imwe Crank Press (STB akateedzana)
C Chimiro Servo Press (STA akateedzana)
Yakatwasuka Side Servo Press (STP akateedzana)
C Chimiro Yakakwira Yekumhanyisa Press (C dzakateedzana)
Yakatwasuka Rutivi Yakakwira Yekumhanyisa Press
Yakatwasuka Chikamu Chechishanu Denderedzwa Gwara Column Press (HS akateedzana)
Yakatwasuka Side Ultra Yekumhanyisa Press (EL akateedzana)
Yakatwasuka Rutivi Yakakwira Yekumhanyisa Press YeMota stator uye rotor (HHD akateedzana)
Shandura Joint Yekumhanyisa Press Press (Yekutsanya akateedzana)
Dhonza Pasi Yakakwira Yekumhanyisa Press (HX akateedzana)
3IN 1NC Servo Rinopa Muchina
Servo Rinopa Muchina
Makobhu mana akabatana
Matanhatu akabatana marobhoti
Mobile erevheta chikuva
600 Ton Yakatwasuka Rutivi Ruviri Poindi Crank Precision Press
1 Midziyo yemidziyo, zita uye huwandu:
600Ton straight divi zvakapetwa poindi crank chaiyo yekudhinda
Mould kuvhenekesa + frequency kutendeuka + emagetsi matete mafuta anotenderera lubrication chishandiso + yakanyorova batira
2 Simba uye zvakatipoteredza zvinodiwa
Voltage Simba rekushandisa magetsi: 380V ± 10%, matatu-chikamu shanu-tambo
Kumanikidza kwemhepo: kumanikidza 0,6 ~ 0.8mpa
Kushanda kwekushanda: -10 ℃ ~ 50 ℃
Kushanda hunyoro: ≤ 85%
3 Midziyo yekumisikidza standard
GB / T 10924-2009 《Kururamisa kwenzvimbo yakatwasuka michina yekudhinda》
GB / T5226.1-2002 《General zvekushandisa zvinodiwa kumaindasitiri michini uye magetsi michina》
5 GB5226.1—2002 《Mechnical chengetedzo yemagetsi magetsi - chikamu I general mamiriro ehunyanzvi》
B JB / T1829-1997 《General technical mamiriro ekugadzira muchina》
17 GB17120-1997, Kuchengetedza uye technical mamiriro ekugadzira michina》
⑹ JB / T9964-1999 《Unyanzvi hunodiwa hwakatwasuka divi michini yekudhinda》
JB / T8609-1997 《Welding hwokugadzira mamiriro ekugadzira muchina》
3.1 Iyo midziyo inoenderana neJapan JIS level 1 chaiyo yekuongorora muyero:
Japan JIS 1 kirasi
Flatness - Inotenderwa Kukosha kwakatenderedza Lower workbench（Mm）
Kufananidza - hunobvumidzwa kukosha pakati pezasi pechiso chinotsvedza nebhenji rebasa repasi（Mm）
Verticality yeslider kumusoro uye pasi neepasi workbench pamusoro - inobvumidzwa kukosha（Mm）
Verticality - inotenderwa kukosha yefa shank gomba kune inotsvedza pazasi pevhu（Mm）
Kubvisa kwakazara - mutengo unobvumidzwa wepamusoro uye wezasi mashandiro（Mm）
4 Main michina parameter
Inokosha simbi yairema ndiro
Slide gwaro bit chimiro
Mapoinzi maviri uye nhanhatu nzira
Slider kufamba kureba
Maximum modulus kukwirira
Kuenderera mberi nzendo paminiti
Nguva / Min
Kukura kwepamusoro workbench (kuruboshwe uye kurudyi x pamberi nepashure)
Ukuru hwezasi workbench (kuruboshwe uye kurudyi x kumberi uye shure)
Main mota simba + frequency converter
55 x 4 + Frequency inoshandura
Mhepo kunobva kumanikidza
Japan JIS chikamu 1
5.1 Maumbirwo epamusoro maitiro uye nzira
(1) Yakakwira frequency kudzima kurapwa kwesiraidhi gadhi njanji, kuomarara pamusoro hrc45,
Zvakanakira:yakagadziridzwa zvakanyanya kupfeka kuramba. (vamwe vagadziri havana yakakwira frequency kudzimisa kurapwa)
(2) Iko kukwirira kwepamusoro kweslider uye gwara rezvitima rakakura kunge ra0.4-ra0.8,
Zvakanakira:yakakwirira nemazvo uye yakaderera kusakara. (hapana kudzima uye kukuya kurapwa kubva kune vamwe vagadziri)
(3) Iyo flatness yesiraidhi gadhi njanji iri 0.01mm / m, uye iko iko iko kukwirira.
Zvakanakira:kunyatso kunatsiridzwa zvakanyanya. (vamwe vagadziri pamusoro 0.03mm / m)
(4) Yese mhepo yedu yedunhu zvikamu iSMC Japan. (vamwe vagadziri vanowanzoshandisa zvigadzirwa zvemumba).
(5) Isu tinotora yeAmerican MAC brand yemhepo yekumwaya solenoid vharuvhu, iyo ine kukwirira kwakanyanya kwemweya kupora maitiro.
(6) Iyo crankshaft yakagadzirwa ne42crda ndiyo yakanakisa muChina
Zvakanakira:simba iri 30% rakakwira kupfuura iro re45 simbi, uye hupenyu hwebasa hwakareba. (vamwe vagadziri vanowanzo shandisa 45 simbi)
(7) Ruoko rwemhangura rwakagadzirwa zqsn10-1 (Tin Phosphorus Bronze) (yakafanana neAida sleeve yendarira). Vamwe vagadziri vanotora bc6 . Yakareba kureba uye hwakareba hupenyu hwebasa.
(8) Pombi yedu yese iri Φ 6, uye dunhu remafuta rakatsetseka uye harisi nyore kuvharika. (vamwe vagadziri vanowanzo shandisa Φ 4)
(9) Chigaro chebhora chinotora chiJapan TM-3 sintered mhangura chiwanikwa (zvakafanana zvinhu naAida)
Zvakanakira: mukana wekurumwa wakadzikira zvakanyanya (general vagadziri vakakanda simbi).
◆ Kukanganisa kwenzvimbo
Ichi chigadzirwa hachina chinokanganisa nharaunda uye hachizogadzi gasi rinokuvadza.
⑴ Kutakura nekuchengetedza midziyo:
① Iyo michina inotora yakakodzera anti-ngura, anti-vibration uye anti-kukanganisa matanho mune yekugadzirisa maitiro, ayo anogona kuvimbisa kutakurwa uye kuchengetwa kwe5 ° c ~ 45 ° c.
② Kana iyo michina ichiendeswa uye ichichengetwa, kutariswa kunofanirwa kupihwa kwairi. Iyo yekushandisa uye yekunze kurongedza haifanire kuve yakanangana pachena kune mvura kana mvura, uye kwekunze kurongedza hakufanirwe kukuvara.
⑵ Kusimudza michina:
Kana uchisimudza uye uchidzikisa nenjodzi, iyo yepasi kana padivi pechigadzirwa haizoiswe pasi pekuvhunduka kana kudedera kwakasimba.
Bvisa uye uchenese firimu repurasitiki rakaputirwa kunze, bvisa ipulagi, uye gadza PU1 pombi yekubatanidza uye PU pombi, kureba kwePU pombi ndeye 700mm.
5.2 Chikamu chechikamu chikuru
⑴ Zvokuimba zvikamu
Iyo furemu yakasunganidzwa neQ235B zvinhu. Mushure mekudonha, kutsamwa kunoitwa kubvisa kushushikana kwemukati mezvinhu. Fuselage inotungamira njanji chinzvimbo nemakona maviri ematanhatu gwara mugwagwa.
Type Rudzi rwekutumira
Iyo yekufambisa giya, crankshaft uye yekubatanidza tsvimbo yakaungana kumusoro kwepamusoro kwemuchina. Iyo huru mota inoiswa pane yekumashure yekuyera pamusoro peiyo furemu, flywheel, batira, nezvimwe
Mune chinzvimbo cherutivi rwemashure rwefuremu, iyo flywheel yakaedzwa kuyerwa pamberi pegungano.
Iyo giya chikamu chinotora yakatwasuka mazino kufambisa mashandiro, uye zvinhu zvacho zvakagadzirwa neepamusoro-simba chiwanikwa simbi 42CrMo, uye inoenderana kupisa kurapwa kunoitwa.
Dry yakadzika inertia batira / brake. Iyo clutch / brake control system yakagadzirirwa neakajairika kuona mudziyo.
Yese miseve inogashira inogadzirwa netini-phosphorus yendarira yekupfeka-isingagadzirise zvinhu.
Iyo inotsvedza inogadzirwa neHT250 zvinhu. Iyo inotungamira inotora maviri-poindi matanhatu-mativi emakona emakona,
Icho chepasi pezasi peye slide block uye yepamusoro pamusoro petafura ine T-groove, iyo inoshandiswa kuisa muforoma. Kureba kwekutsvedza chinogadziriswa nemagetsi emagetsi anopfuura matani makumi masere (kusanganisira).
Tora hydraulic otomatiki zadzisa kuchengetedza system.
Muchina wekudhinda wakakwenenzverwa nemafuta emagetsi uye wakashongedzwa neepasi mafuta oiri alarm system, saka yakachengeteka uye yakavimbika. Iyo yakaenzana ndeiyi: manyorerwo ebhata kudyisa pombi.
⑸ Kuenzanisa mudziyo system
Tora mweya wekumanikidza mhando inotsvedza block block chiyero mudziyo, Mhepo kumanikidza inogona kudzorwa pamhepo kumanikidza inodzora vharuvhu.
Iyo michina yemagetsi inodzorwa nePLC, yakashongedzwa ine simba yemunhu-muchina interface, uye inoratidzwa neyakagunzva skrini yemhando dzakakurumbira.
Yakaiswa pane huru yekushanda pani, anotevera mabasa anogona kuitwa:
TouchIyo yekubata skrini inoratidza mavara echiChinese (kana chinja pakati peChinese neChirungu), iri nyore uye inonzwisisika, uye inoratidza akasiyana paramita yedhata yemuchina, senge huwandu hwekurova, yemagetsi CAM Angle, nezvimwe Uye iyo inoenderana data inogona kuiswa kuburikidza nekubata skrini.
② Ratidza kuyerera kunoshanda kwemuchina, kuti opareta akwanise kushandisa muchina uyu zviri nyore，uye ine chikuru kuyerera mamiriro chinoratidza ；
③ Kushanda uye kutadza ruzivo kuratidza, kuitira kuti vanoshanda uye vanochengeta nekukurumidza vagadzirise matambudziko emapepanhau, vadzikise nguva yekuzorora;
④ PLC yekuisa / kuburitsa poindi chaiyo-nguva yekutarisa basa;
Seta chigadzirwa chekuverenga screen, icho chinogona kuratidza chazvino chigadzirwa kuverenga munguva chaiyo, uye gadza iyo yakatarwa nhamba yezvikamu zvebasa.
Press Magetsi ekudzora muchina anotora matatu-chikamu magetsi magetsi, 380V, 50Hz.
⑦ Iyo huru mota ine yakagadzirirwa kupisa kwemhepo uye zero kumhanya anti-kudzoreredza dziviriro.
⑧ Kuzadzikiswa kwega kwega basa rekutonga nezvibhakera kune inoenderana chengetedzo cheni. Iyo pani inoshongedzwa nekanganiso chiratidzo chiratidzo uye bhatani bhatani kupedzisa basa re reset mushure mekukanganisa kusimbisa.
5.3 Maitiro ekushanda
Dhinda yakagadzika inching, isina, inoenderera matatu anoshanda modes. Iyo yekushanda modhi inosarudzwa ne switch uye yepakati inodzorwa nebhatani.
5.4 Matanho ekuchengetedza
⑴ Emergency bhatani rekumisa: bhatani "emergency stop" bhatani kana zvikaitika zvisina kujairika mashandiro emuchina. Dhinda ine matatu matatu ekumira mabhatani.
Imwe pane pani yekudzora oparesheni, imwe iri mukoramu, imwe pane maviri-maoko oparesheni tafura; Dhinda chero mabhatani ekumira echimbichimbi uye muchina unomira ipapo ipapo. Chinzvimbo chebhatani rekumira nechimbichimbi pakoramu iri anenge 1,2 metres kubva pasi, inosangana nezvinodiwa zve ergonomics；
Bhatani-remaoko mashandiro bhatani: maviri-ruoko pasi pasi yekuenzanisira nguva muganho ndeye 0.2-0.5s;
Protection Kuwedzeredza kuchengetedzwa: iyo slide block ine hydraulic yekuremedza dziviriro sisitimu yekuona kuti iyo yekudhinda haizokuvadze iyo yekudhinda uye kufa nekuda kwekuwandisa.
Kuwedzeredza mushure mekutsvedza iyo inogara pazasi yakafa poindi, inogona chete kushandisa inching, kudzoreredza kumusoro kwepamusoro kufa nzvimbo yekugadzirisa uye kumanikidza, basa.
6. Kugadziriswa kwemidziyo
6.1 Chikamu chakakura chechimiro
Zvishandiso, nzira dzekurapa
Zvishandiso 42CrMo, kudzimwa uye kutsamwa Hs42 ± 20
Zvishandiso ZQSn10-1 Tin phosphor yendarira
Zvishandiso 40Cr, kudzimwa uye kutsamwa Hs40 ± 20
Zvishandiso QT-500 Blunting kurapwa
Sawtooth bhora musoro
Zvishandiso HT-250, Yakakwira frequency kudzima hrc45 madigiri pamusoro
Mhangura (sleeve yemhangura)
6.2 Main zvikamu zvinogadzira / brand
Mugadziri / brand
Slider kugadzirisa mota
Yakaomarara batira bhureki
Kaviri solenoid vharafu
Thermal ataure, webetsero chinongedzo
Pressure achidzikisa vharafu
Hydraulic kuwandisa pombi
Magetsi lubricating pombi yemafuta
USA Nguva / TWB
Mhepo ichivhuvhuta mudziyo
Mould kufa jekeso
Yakakanganiswa kuona interface yakachengetedzwa
Wiring kuburikidza nePLC
Photoelectric dziviriro mudziyo
Lawn kuenderana nemamwe mazita
6.3 zvishongedzo, akakosha maturusi runyorwa
Inesarudzo / yakajairwa
Maturusi ekugadzirisa uye bhokisi rematurusi
6.4 Yakakosha michina (yesarudzo) runyorwa
Kukanganisa kuona mudziyo
Pazasi pakafa poo yekuona mudziyo
Rapid muforoma kuchinja mudziyo
Die pad (mhepo pamutsago)
Tsamba Yedu Yevhiki
Kune chero munhu ari kufunga nezvekambani yedu nekutengesa,
ndapota taura nesu nekutitumira maemail kana kuti tibata nesu nekukurumidza.
Kero:NO.17, Xingzhou Road, Qianzhou Town, Wuxi City, Jiangsu Province, China